यी हुन् आफू उम्मेदवार भएर आफैंलाई मतदान गर्न वञ्चित नेता ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन् आफू उम्मेदवार भएर आफैंलाई मतदान गर्न वञ्चित नेता !
काठमाडौं, मंसिर २० । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रतिनिधिसभामा एमाले २ र माओवादी केन्द १ स्थानमा विजयी